Rugs Moss Alexandra Kehayoglou | Famoronana an-tserasera
Mitady tolo-kevitra tany am-boalohany sy samihafa foana izahay (manao ahoana ianao sabatra) antsoy ny ny sain'ny karazana taranja kanto na koa vita tanana toy ny mitranga amin'ity fidirana ity. Mitranga ihany koa fa ny asa-tanana dia nifindra tamin'ny raim-pianakaviana sy ny zanany vavy sns, matetika dia manana karazana toetra voajanahary mba hamokarana asa famoronana na farafaharatsiny mba hanohizana izay mampiavaka ny fianakaviana.
Alexandra Kehayoglou dia teraka tany Arzantina ary ampahany amin'ny fianakaviana nanokana taranaka maro ho an'ny fanamboarana karipetra. 34 taona i Alexandra ary namorona karipetra karazana Moss hatramin'ny nahavitany ny fianarany zava-kanto tamin'ny taona 2008. Mampiasà ny sisa tavela amin'ny ozin-trano ao Buenos Aires mba hamoronana sanganasa manokana izay azo atsonika ho lasa canvas izay nipoirany. tontolo.
Kehayoglou ara-dalàna roa volana eo ho eo vao vita ny karipetra karazana moss momba. Araka ny nambarany avy tao amin'ny Instagram, dia efa nanana ny famokarana karipetra ao amin'ny fototarazony izy, koa ny famoronana azy ireo tamin'ny fomba kanto dia tonga ho azy.
Ny fombanao noforoninao abstraction of landscapes sy toerana hitanao any amin'ny firenenao. Heverin'izy ireo sy tanjon'izy ireo tsara ny hahatonga ny olona rehetra hahatsapa fa any amin'ny toerana azo alaina avy aiza na aiza any Arzantina izy ireo. Mamorona karaoty moss be loatra, izay apetraka eo akaikin'ny sary hosodoko amin'ny loko mitovy loko aminy, dia hanome anao ny fahatsapana mifangaro tanteraka amin'ireo lafin-tany ireo.
Araka ny nambarany, izy ireo dia toy ny karazana vavahady izay manana fahefana hitondra anao any amin'izay misy ny fahatsiarovana. Afaka mahita fampahalalana misimisy sy asa hafa avy aminy ianao ny tranonkalanao, Instagram y elespartan. Ny karipetra tena manokana izay afaka manome anao mikitika manokana na aiza na aiza misy azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny karipetra volon'ondry toy ny lumoty izay mitondra ny natiora ao an-tranonao
Hanao ahoana ny andriambavy Disney amin'ny nofo?